Gịnị Ka M Ga-eme ma Papa M na Mama M Gwa M Ihe M Ga-eme? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
I nwere ike ịma ụmụaka ibe gị ndị nwere ike ịlọta mgbe ọ bụla sọrọ ha n’abalị. I nwekwara ike ịma ndị nke na-eji ụdị ejiji ọ bụla masịrị ha, ma ọ bụkwanụ soro ndị enyi ha na-aga ebe ọ bụla masịrị ha. Ọ ga-abụ na papa ha na mama ha anaghị enwe efe ịma ihe ha na-eme.
Baịbụl kwuru na ụmụaka e si otú ahụ zụọ agaghị aba uru. (Ilu 29:15) Ihe mere ịhụnanya ji dị ụkọ n’ụwa taa bụ na ọtụtụ ndị na-eche naanị maka onwe ha. Mgbe ha dị obere, papa ha na mama ha na-ahapụ ha ka ha na-eme otú masịrị ha.—2 Timoti 3:1-5.
Kama ịchọ ịdị ka ụmụaka a na-ahapụ ka ha na-eme otú masịrị ha, gbalịa ghọta na ihe mere papa gị na mama gị ji agwa gị ihe ị ga na-eme bụ na ha hụrụ gị n’anya, chọọkwa ka ihe dịrị gị ná mma. Otú ahụ ha si agwa gị ihe ị ga na-eme gosiri na ha na-eṅomi Jehova Chineke, bụ́ onye gwara ndị ya, sị:
“M ga-eme ka i nwee nghọta, zikwa gị ụzọ ị ga-eso. M ga-enye gị ndụmọdụ, anya m ga-adị n’ebe ị nọ.”—Abụ Ọma 32:8.